Madaxweynaha FIFA Sepp Blatter oo isbitaal ku jira
Madaxweynihii hore ee FIFA Sepp Blatter ayaa loo qaaday isbitaal isagoo xaaladdiisa ay aad u liidato.
Gabadha Sepp Blatter ee Corinne ayaa sheegtay in aabaheed loola cararay isbitaal, laakiin xaaladiisa ay soo hagaageyso.
Corinne ayaa u sheegtay Blick: “Aabahay wuxuu ku jiraa isbitaalka, maalinba maalinta ka dambeysa wuu soo fiicnaanayaa, laakiin wuxuu u baahan yahay waqti iyo nasasho. Aniga oo ku hadlaya magaca qoyskeyga, waxaan kugu boorinayaa inaad ilaaliso arimahaaga gaarka ah. ”
Sepp Blatter wuxuu ku jiraa xaalad aad u liidata, laakiin sidaa uma dhiman.
Ma ahan markii ugu horreysay oo 84-jirkan la dhigo isbitaal kadib markii la dhigay isbitaal ku yaal Switzerland sannadihii 2015 iyo 2016.
Blatter ayaa laga ceyriyay xilka madaxweynaha FIFA sanadii 2015 kadib 17 sano oo uu madaxweyne ahaa waxaana laga mamnuucay ka qeyb galka howlaha isboortiga mudo lix sano ah kadib markii lagu eedeeyay musuq maasuq intii uu xilka hayay.
CAS ayaa ku ganaaxday Michel Platini, oo markaa ahaa madaxweynaha UEFA lacag dhan 2 milyan oo doolar, taasoo uu ku sheegay inay tahay shaqo aan toos ahayn, taasoo ka hor imaaneysa xeerka anshaxa FIFA.
Michel Platini ayaa la ganaaxay muddo siddeed sano ah, inkastoo xukunkiisii ​​bishii Febraayo 2016 laga dhigay lix sano.
Sepp Blatter wuxuu ku guuldareystay racfaan uu qaatay bishii Diseembar, si uu u qaato xayiraadaha looga saaray.
Si kastaba ha noqotee, cudurka Sepp Blatter wuxuu ku soo beegmayaa xilli dadka waayeelka ah ay halis ugu jiraan inay dib u bilaabaan coronavirus.
against the release of the convicted for
Qatar oo xiisaynaysa xasiloonida